प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा महासचिव विप्लवबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ? — Sanchar Kendra
प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा महासचिव विप्लवबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’बीच सोमबार भेटवार्ता भएको छ ।
महासचिव विप्लव प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका हुन्। भेटमा उनले सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्न ढिला किन भयो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
नेकपा र सरकारबीच गत फागुन २० गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने, हिरासत र कारागारमा रहेका नेता र कार्यकर्ता रिहा गर्ने र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएको थियो ।
सोमबारको भेटमा विप्लवले उक्त सहमति कार्यान्वयनमा ढिला भएको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेता कार्यकर्ता रिहाइका लागि आफूहरु लागिरहेको जवाफ दिएका छन् ।
३ बुदे सहमति भएर प्रतिबन्ध हटेको झन्डै १ महिना पुग्ने लागे पनि ओली सरकारले राजनीतिक बन्दिहरुलाई भने रिहा गरेको छैन । पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि महासचिव विप्लव शहिद परिवार तथा अपांग, घाइते योद्धा तथा पार्टीका नेता कार्यकर्तासँग भेटघाटमा व्यस्त छन ।